▷ Ahoana ny fomba fananganana Fortnite
Iray amin'ireo fiasa tsara indrindra azontsika jerena ao anatiny Fortnite dia ny fananan'ny olona fahaizana construir ao anatin'ny lalao misy karazana rafitra misy fitaovana vitsivitsy.
Tsy afaka manangana trano goavambe ianao, fa ny lalao kosa manana modely fanovana milay sy mora ampiasaina. Ho an'ity dia tsy maintsy angonina aloha ny fitaovana, fa hiresaka lalina izany isika.
Ahoana no fomba ahazoako fitaovana fananganana ao Fortnite?
Conseguir fitaovana ao Fortnite Asa somary tsotra izy io ary tsy ho ela. Ny zavatra tokony hataon'ny olona aloha dia ny mampitafy kofehy ny tenany ary mivoaka any ivelany.
Raha vantany vao azonao ny tampon'isa, ny olona dia afaka miditra amin'ny mety hisian'ny singa fananganana na aiza na aiza. Afaka manangona izy ireo hazo, vy ary vato.
Raha vantany vao tafapetraka ny fitaovana dia afaka manomboka manangana segondra ny olona.
Raha vantany vao nangonin'ny olona ireo fitaovana dia azonao atao ny miditra amin'ny famoronana sombin-javatra samihafa atolotry ny lalao eo anelanelan'ny tsanganana sy ny marindrano ary ny domes. Samy manana ny vidiny avy Fitaovana 10 amin'ny fitaovana ampiasaina.
Raha vantany vao nifidy ny toerana hananganana isika dia tsy maintsy miditra amin'ny menio fananganana ary manomboka manangana ilay sanganasa tadiavintsika. Ny sanganasa tsirairay dia hahazo fahasalamana rehefa mandeha ny fotoana ao anatin'ny lalao.
Ny tolo-kevitray dia ny fampifangaroana sombin-kazo amin'ny metaly satria mora simba ny hazo, fa ny vy kosa fantatra fa fitaovana henjana indrindra amin'ny lalao.
Aza adino ny mametraka ny lakilen'ny fanamboarana hatrany amin'ny fomba ahazoanao aina.